DWG Kudzoreredza Turu. AutoCAD Kugadzirisa & Kudzoreredza Software.
4.90 / 5 (kubva 1,481 mavhoti)
Sei DataNumen DWG Recovery?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kwe DWG kupora chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen DWG Recovery ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen DWG Recovery inoputa kukwikwidza
Mhinduro Yekutevera AutoCAD Zvikanganiso Nekuda kwehuori DWG mafaira
Solution ye "Dhirowa faira haina kushanda" Kanganiso
Solution ye "Yemukati Kanganiso! Dbqspace.h@410: eOutOfRange" Kanganiso
Solution ye "Kwete Autodesk DWG”Kukanganisa
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen DWG Recovery v2.1
Tsigiro yekudzosera AutoCAD R14 kusvika 2021 DWG mafaira.
Tsigiro yekudzosera zvinotevera zvinhu mu DWG mafaira: BHUKU, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH), VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), DIMENSION YAKADZIDZWA), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), LEADER, TOLERANCE, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYERB, STAY STYLE, LTYPE DZIDZISO OBJ, LTYPE, ONA DZIDZISO OBJ, ONA, UCS DZIDZISO OBJ, UCS, VPORT DZIDZO OBJ, VPORT, APPID DZIDZISO OBJ, APPID, DIMSTYLE DZIDZISO OBJ, DIMSTYLE.
Tsigiro yekuwanazve lost & uwane zvinhu mu DWG mafaira.
Tsigiro yekudzosera zvinhu zvakadzimwa mu DWG mafaira.
Kutsigira kuti uwanezve DWG kudhirowa kubva kutemporary mafaera pakaitika dambudziko redata.
Tsigiro yekuburitsa yakamisikidzwa faira mu DWG fomati uye fomati yeDXF.
Tsigiro yekuburitsa yakamisikidzwa faira muAutoCAD R14 kusvika 2017 fomati.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo DWG mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa iyo AutoCAD DWG faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
kushandisa DataNumen DWG Recovery Kudzoreredza Corrupt AutoCAD DWG Files
Kana yako AutoCAD DWG mafaira akaora kana kukuvara uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen DWG Recovery kuongorora iyo DWG mafaera uye kudzoreredza yakawanda data kubva kwavari sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wawana chero huori kana kukuvara dwg mafaira ane DataNumen DWG RecoveryNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo dwg mafaira.
Sarudza yakaora kana yakakuvara dwg faira kuti riwanikwe:
Unogona kuisa iyo dwg faira zita zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo dwg faira kuti riwanikwe pakombuta yemuno.
Kana iwe uchiziva fomati yesosi yakakuvadzwa DWG faira, ipapo unogona kurondedzera mubhokisi re combo:
Nokusingaperi, inoiswa ku "Auto Determined", zvinoreva DataNumen DWG Recovery ichaongorora uye kuona mafomati ayo otomatiki.
Parizvino mafomati anotevera anotsigirwa kunowanikwa DWG mafaera:
AutoCAD 2013-2017 DWG urongwa
AutoCAD 2010-2012 DWG urongwa
AutoCAD 2007-2009 DWG urongwa
AutoCAD 2004-2006 DWG urongwa
AutoCAD 2000-2003 DWG urongwa
AutoCAD R14 DWG urongwa
By default, DataNumen DWG Recovery ichaponesa iyo yakagadziriswa dwg faira mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.dwg, uko xxxx ndiro zita rezvinobva dwg faira. Semuenzaniso, for source dwg faira Yakakuvara.dwg, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira richava Damaged_fixed.dwg. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Kana iyo yakabuda yakagadziriswa faira ine.DWG kuwedzera, ipapo DataNumen DWG Recovery ichaiburitsa mu DWG format.
Kana iyo yakabuda yakagadziriswa faira iine .DXF yekuwedzera, ipapo DataNumen DWG Recovery ichaiburitsa muDXF fomati.
Iwe unogona kudoma izvo zvakabuda zvakagadziriswa faira fomati mubhokisi re combo:
Nekutadza, kana iwe ukasadoma iyo yakabuda faira fomati, saka DataNumen DWG Recovery inoshandisa fomati imwechete sosi DWG ikwidzwe.
Parizvino zvinotevera mafomati ekubuda anotsigirwa:
Baya bhatani, uye DataNumen DWG Recovery kuda start kuongorora uye kudzoreredza sosi dwg faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana iri sosi dwg faira rinogona kudzoreredzwa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakagadziriswa dwg faira neAustCAD kana imwe dwg zvinoshandiswa.
DataNumen DWG Recovery 2.1 inoburitswa muna Zvita 16, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.9 inoburitswa munaNovember 4th, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.8 inosunungurwa munaJune 30, 2020
Tsigiro yekudzosera AutoCAD 2018 kusvika 2021 DWG mafaira.
DataNumen DWG Recovery 1.7 inoburitswa munaNovember 19th, 2019
DataNumen DWG Recovery 1.6 inoburitswa muna Kubvumbi 19, 2018
Tsigiro yekudzosera AutoCAD 2015 kusvika 2017 DWG mafaira.
DataNumen DWG Recovery 1.5 inoburitswa muna Chivabvu 29, 2014
Tsigiro yekudzosera AutoCAD R14 kusvika 2003 DWG mafaira.
DataNumen DWG Recovery 1.1 inoburitswa munaKurume 31, 2014
Tsigiro yekudzosera AutoCAD 2004 kusvika 2006 DWG mafaira.
DataNumen DWG Recovery 1.0 yakaburitswa muna Ndira 7, 2014
Tsigiro yekudzosera AutoCAD 2010 kusvika 2014 DWG mafaira.
Tsigiro yekudzosera zvinotevera zvinhu mu DWG mafaira: BHUKU, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH), VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), DIMENSION YAKADZIDZWA), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), LEADER, TOLERANCE, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYERB, STAY STYLE, LTYPE DZIDZISO OBJ, LTYPE, WOONA DZIDZO OBJ, WOONA, UCS DZIDZISO OBJ, UCS, VPORT DZIDZO OBJ, VPORT, APPID DZIDZISO OBJ, APPID, DIMSTYLE DZIDZO OBJ, DIMSTYLE
Tsigiro yekuburitsa yakamisikidzwa faira muAutoCAD R2.5, R2.6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000 kusvika 2014 fomati.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa iyo Outlook DWG faira ine mamiriro ezvinhu eWindows Explorer nyore.
Kugadzirisa uye kudzosera yakaora Photoshop mufananidzo (PSD, PDD) mafaera.